देश नरहे, रहदैन हाम्रो अस्तित्व
अमृत सापकोटा ।भरतपुर
ए विर सपूत आऊ न छिटो,
बचाउन तिम्रो आमाको माटो ।
तिमी कहाँ छौ ? तिमी कहाँ छौ ?
एउटा प्रसङ्ग भन्छु, सुन
खपी नसक्नु भएर लाग्छ मन रून ……..
जब सीमा छेउ जान्छु, अल्मलिन्छु
यता हो कि उता हो भनि भौंतारिन्छु
सोधौँ कस्लाई मेरो सीमा कति हो भनि ?
लगत्तै इतिहासका ठेली पल्टाई हेर्छु अनि
लाग्छ कङ्काल हुँ अकालको
म भक्त यो देशको,
नहेर ताली पड्काई रङ्गमञ्चमा बसेर
आऊ काँधमा काँध मिलाउ कम्बर केसर
अबेर भइसक्यो नहेर बसेर
तिमी कहाँ छौ ? हे सपूत, तिमी कहाँ छौ ?
CGTN ( China global television network) ले मे-०२ मा ट्विटर मार्फत भनेको थियो “विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चिनमा पर्छ ।” अनि यस विषयमा १४ वर्षअगाडि बहस भएको थियो । चिनको लोकप्रिय राष्ट्रिय गीतहरूमा भनिएको छ – “ हाम्रो महान राष्ट्र जहा चुमुलुम्बा विश्वको सर्वोच्च शिखर छ ।” आदि इत्यादि ।
माओ त्सेतुङको पालामा विपि कोइराला गृहमन्त्री थिए । चीनसँग वार्ता गर्दा उसले सगरमाथा हाम्रो भनेपछि गणेशमान सिंहसहितको टोलीले सगरमाथा क्षेत्रका नेपालीहरूले नेपाल सरकारलाई तिरेको तिरो पेश गर्न चाइना गए र अन्नत: त्यसपछि नेपालको शिर सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालकै हो भनियो ।
नेपालका तराईका अधिकांश भूमिहरू अतिक्रमण भएका छन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो । यो मैले त्यसै भनेको होइन यसमा तथ्याङ्क र प्रमाणहरू प्रसस्तै छन् । जस्तै वि.सं.२०३६ मा राजा विरेंद्रले सुधारिएको पञ्चायत लिने कि बहुदलीय व्यवस्था ? भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउदा सो क्षत्रका जनता सहभागी भएका अभिलेखहरू छन् ।
वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने ईतिहासकै सबैभन्दा सजिलो र सहज समय रहेको छ । सिङ्गो नेपाल र नेपाली एक भएर राष्ट्र रक्षाका निम्ति जुट्न तयार छ । राष्ट्र र राष्ट्रीयताको विषयमा प्रतिपक्ष , सत्तापक्ष र सर्वसाधारण सम्पूर्णको अत्यान्तै न्यानो साथ र सहयोग प्राप्त भएको छ । यस्तो सहज परिस्थितिमा पनि सरकार कदम नचाल्ने, मौन बस्ने हो भने राजीनामा दिनु सिवाय अरू केहि रहँदैन । यस्तो परिस्थिति छ – सिङ्गो राष्ट्र नै एक ढिक्का बनेको छ । यस्तो बेलामा यी ३ क्षेत्र मात्र केन्द्रीत नरही सम्पूर्ण पुराना राष्ट्रघाती सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, समयसापेक्ष फेरबदल तथा बहस गर्नुपर्छ ।
हामी निरन्तर सङ्घर्षरत रहन्छौं । `सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल´ को परिकल्पना गर्छौ । आखिर केका लागि । जब राष्ट्र नै रहँदैन भने हामी रहौंला र ?
“नेपाली हामी रहौंला कहाँ
अस्तित्व हाम्रो रहँदैन यहाँ
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको आधिकारिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सक्दैनौ भने तिमीलाई तिम्रै पद र शक्तिले पोल्नेछ, युगयुगान्तरसम्म ईतिहासले सराप्नेछ । सम्पूर्ण नेपालीहरू अविलम्ब राष्ट्र रक्षाका निम्ति जस्तोसुकै कठोर परिस्थिति सामना गर्न तत्पर रहेको बेलापनि तिमी नेतृत्व लिने आँट राख्दैनौ भने इतिहासबाट ठगिन पुगेको नालायक राष्ट्रभक्ति कहलिने छौ ।
यस्तो संवेदनशील कुरामा पनि सरकार यदि बैठक बोलाउन साथै कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल भारतसँग राष्ट्रिय सवाल तथा सार्वभौमसत्ताबारे कुरा गर्ने आँट गर्दैनौ भने आत्मसमर्पण गरिदेउ । त्यसपछि हेर्नु सिङ्गो नेपाल र नेपाली त्यसदिनबाटै आफ्नो भूमिरक्षाका निम्ति आफ्नो ज्यानको कुनै पनि प्रवाह नगरी कम्मर कसेर हातेमालो गर्दै काँधमा खुकुरी बोकेर तैनाथ हुनेछन् सिमानामा ।
हामीले राखेका ती सिमा सुरक्षा बल, नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख, नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय आदि केका लागि ? के अब सिमा सुरक्षा बल, नेपाली सेना देशभित्र चोकचोकमा, जिल्लाजिल्लामा मात्र तौनाथ गराउन हो ? होईन भने तत्काल देशका सिमा सुरक्षाका लागि हातहतियार सहितको टोलीहरू प्रत्येक पिल्लरमा खटाइनु पर्छ ।
रातारात अध्यादेश ल्याउन समय निस्कने मन्त्रीज्यूहरूलाई भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका निम्ति बैठक बस्न समय मिलेनछ।धिक्कार छ, यस्ता साशकहरूलाई शासनसत्ता सुम्पिने हामी आफैलाई नै धिक्कार छ ।
भारतले अनाधिकृत रूपमा कब्जा गर्दा नेपाल सरकारले ( जुनसुकै राजनीतिक दलको भए पनि, जसको पालामा भएपनि) केवल भिडियो कन्फरेन्स, सामाजिक संजाल तथा मिडियामा मात्र विरोध नगरी सम्बन्धित मुलुकको सरकारसमक्ष फेस टु फेस टेवल टक गर्नुपर्छ । यदि यस्तो गर्न हिम्मत छैन भने प्रत्येक नेपालीलाई गाउँगाउँबाट बस्तीबस्तीबाट उठ्न आग्रह गर्नुस् यो देश बचाउन, भूमि रक्षा गर्न ।
त्यसपछि हेर्नुहोस् नेपाली जनताको तागत तत्काल २४ घण्टामै आफ्नो मिचीएको, लुटिएको, बेचिएको, हडपेको भूमी फिर्ता ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् ?
अन्तत: नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै विहीन गराउने हो भने यस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताका विषयमा पनि कुनै कदम नचाल्ने हो भने तत्काल पदमुक्त भई राष्ट्रभक्ति बनिदेऊ । होईन भने राष्ट्रविरोधी बनेर देशको सत्ता हाँक्ने तिमीलाई कुनै अधिकार छैन । कि त राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा निरन्तर सङ्घर्षरत भएर कुनै पनि प्रलोभनमा नफस्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ ।
एकजुट भएर आजैबाट अघि बढौँ, पक्कै पनि हामी युगयुगान्तरसम्म ईतिहास बन्नेछौ ।
(सापकोटा युवा सञ्जाल भरतपुर महानगरपालिका सचिव हुन् ।)